तपाईंको भोजन कोठाको लागि विभिन्न प्रकारका कुर्सीहरू बेजिया
तपाईंको भोजन कोठाको लागि विभिन्न प्रकारका कुर्सीहरू
मारिया vazquez | 16/07/2021 18:00 | फर्नीचर
छनौट गर्नुहोस् भोजन कुर्सि यो हाम्रोलागि सजिलो हुँदैन। तिनीहरू यस ठाउँको कार्यक्षमतामा कुञ्जीहरू हुन्; यदि तिनीहरू दैनिक आधारमा हामी यो ठाउँ प्रयोग गर्छौं भने तिनीहरू हाम्रो लागि आरामदायक हुनुपर्दछ। तर, थप रूपमा, यसको यसको सौंदर्यशास्त्रमा उनीहरूको ठूलो प्रभाव छ। तपाइँलाई छनौट गर्न मद्दतको लागि, आज हामी तपाइँसँग तपाइँको भोजन कोठाको लागि विभिन्न प्रकारका कुर्सीहरू साझा गर्न चाहन्छौं।
हामीले आज साझा गर्ने कुर्सीहरू आधुनिक डिजाइन कुर्सीहरू हुन्। धेरै लोकप्रिय कुर्सीहरू जुन हामी आशा गर्दछौं कि त्यसले तपाईंलाई प्रेरित गर्न सक्दछ तपाइँ आफ्नो भोजन कोठाको लागि कुर्सीको शैली चाहानुभएको पहिचान गर्न। यसको एक्लोसिविटीका लागि एकको प्रेममा झर्न नडराउनुहोस्, आज धेरै कुर्सीहरू उनीहरूबाट प्रेरित छन् र उनीहरूको नक्कल पनि गर्छन्, जसले तपाईंलाई मूल भन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा समान टुक्रा किन्न अनुमति दिनेछ।
Eames प्लास्टिक आर्मचेयर यो चार्ल्स र रे इम्स द्वारा १ 1950 .० मा न्यू योर्क मा आधुनिक कला संग्रहालय को लागी डिजाइन गरीएको थियो। थियो प्लास्टिकमा पहिले औद्योगिक उत्पादन गरिएको कुर्सी र फर्निचर को एक नयाँ प्रकार को अग्रगामी जो पछि सामान्य बन्न सक्छ: बहुफंक्शनल कुर्सी जसको खोल विभिन्न आधारहरु संग जोड्न सकिन्छ।
आज तिनीहरू अझै पनि एक व्यावसायिक सफलता छन्। बजारमा धेरै नक्कलहरू सहित, भित्री र बाहिरी दुबै खाने कोठा सजाउन एक उत्तम विकल्प। ती संग काठको खुट्टा तिनीहरू आज सबैभन्दा लोकप्रिय छन् किनकी उनीहरू नॉर्डिक चलनका साथ राम्रा साथीहरू गर्छन्। तिनीहरूलाई आधुनिक शैलीको सेतो टेबलको वरिपरि राख्नुहोस् र तपाईं आधुनिक भोजन कोठाको लागि उत्तम सेट पाउनुहुनेछ। वा यसलाई काठको टेबुलसँग मिलाउनको लागि परम्परा र आधुनिकतामा शर्त लगाउनुहोस्।
फ्रान्समा जन्म १ 1927 २। मा, टोलिक्स कुर्सी सबैभन्दा अनुरोध गरिएको टुक्राहरू मध्ये एक रहन्छ। इस्पात र stackableव्यावहारिक र गुणस्तरीय धातुको फर्नीचर उत्पादन गर्न फ्रान्सेली उद्योगपति जेभियर पाउचर्डले स्थापना गरेको टोलिक्सले निर्मित यो कुर्सी आजसम्म बहुविध संस्करणहरूमा बाँचेको छ।
जस्ती इस्पातले बनेको, म्याट वा ग्लसमा वार्निश, रंगमा लाहिएको ... टोलिक्स कुर्सीहरू देहात वा औद्योगिक शैलीको खाने कोठाहरू सजावटको लागि रस्टिक देखिने काठको टेबुलहरू जोड्नुहोस्, र अधिक अवन्त-गार्डे शैली खोज्नको लागि आधुनिक र न्यूनतम। संग सेट पूरा गर्नुहोस् ठूला लटकन बत्तीहरू र तपाईं पत्रिका खानको लागि कुना पाउनुहुनेछ।
वाई-चेयर, जसलाई विशबोन चेयर पनि भनिन्छ, वेगनरको सबैभन्दा प्रसिद्ध डिजाइन हो र कुर्सीहरूको प्रकार जुन हामी कुनै पनि भोजन कक्षमा सबैभन्दा सफल ठान्दछौं। १ 1949 XNUMX in मा सिर्जना गरिएको, यो कुर्सी डोरी सिटको साथ काठमा कोरिएको, सँग एक अद्वितीय Y-आकारको backrest छ जसले यसलाई यसको नाम दिन्छ। यसको न्यूनतम उपस्थितिको बावजुद, यसलाई हातले बनाउनको लागि ठूलो सीप चाहिन्छ।
सुन्दर र आरामदायक कुर्सी भित्र उपलब्ध छ विभिन्न काठ, समाप्त र रंगहरू। यसको धेरै परम्परागत संस्करणमा, यो दुबै क्लासिक र एभन्ट-गार्डे वातावरणमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ, सेतोमा सजाइएको, जुन यसले ठूलो तापक्रम प्रदान गर्दछ। कालो र आधुनिक शैलीको काठको तालिका वरिपरि हुँदा, यो भोजन कोठाको संयम र भव्यता बढाउनको लागि आदर्श हो।
प्यान्टन कुर्सी एउटा हो पप आर्ट आइकनहरू। १ 1960 in० मा आर्किटेक्ट भेर्नर पार्टन द्वारा डिजाइन गरिएको, यो १ 1967 XNUMX देखि वीट्राको सहयोगमा श्रृंखलामा निर्माण गर्न शुरू भयो। यो एक हो एक टुक्रा एर्गोनोमिक कुर्सी, र पूर्ण प्लास्टिकको बनेको। एक टुक्रा जुन केवल सबै भन्दा साहसी संग हिम्मत हुनेछ।
प्यान्टन कुर्सी विविध रंगहरूमा उपलब्ध छ। भन्नु पर्दैन, तिनीहरू ल्याउँछन् आधुनिक र साहसी स्पर्श तिनीहरू राखिएको जहाँ कोठामा। जे होस्, त्यहाँ पान्टन कुर्सीहरूसँग विशेष रूपमा खाने कोठाको टेबुल वरिपरि हिम्मत गर्ने मानिसहरू छन्, अन्य प्रकारका कुर्सीहरूसँग मिलाउनु सामान्य छ, विशेष गरी यदि तपाईं न्यानोपन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने। हामी तिनीहरूलाई गिलास वा हल्का काठका टेबुलहरूको साथ मिलाएर सेतामा माया गर्छौं।
सेस्का कुर्सी, १ 1928 २ in मा मार्सेल ब्रेयुर द्वारा डिजाइन गरिएको र नोल द्वारा सम्पादित, ट्यूबलर स्टील फ्रेम र ब्रेडेड जाल फिर्ता र सीट, परम्परागत शिल्प को विशिष्ट। यसको समयमा क्रान्तिकारी संयोजन जसको वैधता आज निर्विवाद छ।
उनीहरू जस्तो छन् जाल फर्नीचर एक प्रवृत्तिखाने कोठामा सेस्का प्रकारका कुर्सीहरू समावेश गर्नु बढी सफल विचार जस्तो देखिएन। हामी गिलास वा देहाती काठको टेबुलको साथ अधिक पारंपरिक संस्करण मनपराउँदछौं। तर कालो फ्रेमको साथ ती पनि किनभने यो रोचक टोनमा काठको टेबुल वरिपरि राखिन्छ जब सिर्जना गरिएको छ रमाईलो विपरीत।
कुन प्रकारको कुर्सी तपाईं आफ्नो भोजन कोठाको लागि छनौट गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » फर्नीचर » तपाईंको भोजन कोठाको लागि विभिन्न प्रकारका कुर्सीहरू
गल्ती के हो?
खाना जुन एक विरोधी भडकाउने खानामा खान सकिन्छ